musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii inoyambira vashanyi nezvekurangarira zvigadzirwa zvezuva
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vashanyi veHawaii vakanyevera nezve vanoyeuka zvigadzirwa zvezuva
Johnson & Johnson Consumer Inc.anozvidira kurangarira mizhinji mishanu mishanu NEUTROGENA uye AVEENO aerosol sunscreen chigadzirwa mitsara.
Kushandisa sunscreen kwakakosha kuhutano hweveruzhinji uye kudzivirira gomarara reganda.
Izvo zvinorangarirwa sunscreens zvakaiswa mumachira eerosol uye zvakagoverwa nyika yese.
Vatengi vanofanirwa kumira kushandisa izvo zvakakanganiswa zvigadzirwa uye vorasa kana kuzvidzorera.
The Hawaii State Dhipatimendi Rehutano (DOH) iri kuzivisa vagari nevashanyi kuti Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) iri kurangarira nekuzvidira kwese kwakawanda mashanu mashanu NEUTROGENA® uye AVEENO® aerosol sunscreen chigadzirwa mitsara. Kambani kuyedza yakaratidza yakaderera mazinga ebenzene mune mamwe sampuli yezvigadzirwa. Vatengi vanofanirwa kumira kushandisa izvo zvakakanganiswa zvigadzirwa uye vorasa kana kuzvidzorera.
Izvo zvinorangarirwa zvigadzirwa zvinopfapfaidza-pamasikati ezuva, kunyanya:
NEUTROGENA Gungwa Dziviriro aerosol sunscreen.
NEUTROGENA Yakapora Dry Sport aerosol sunscreen.
NEUTROGENA Isingaoneke Mazuva ese kudzivirira aerosol sunscreen.
AVEENO Dzivirira + Zorodza aerosol sunscreen.
Iwo anoyeuchidzwa ezuva ezuva akaiswa mukati meeerosol cans uye akagoverwa nyika dzese, kusanganisira Hawai'i, kuburikidza nevakawanda vevatengesi. Matatu ezuva anodzivirirwa ezuva ane oxybenzone uye / kana octinoxate, zvigadzirwa zvinorambidzwa kutengeswa kana kugoverwa muHawaii pasi peChikamu 11-342D-21, Hawaii Revised Statute, iyo yakatanga kushanda muna Ndira 2021.
Benzene, iyo kemikari inowanikwa mumagetsi ezuva akakanganiswa, yakajairika mune zvakatipoteredza zvinosanganisira mumotokari chiutsi uye fodya yefodya, uye inozivikanwa nekukonzeresa kenza muvanhu. Benzene haisi chinhu chinogadzirwa nemishonga yezuva uye huwandu hwebenzene hunowanikwa mune zvakayeukwa zvigadzirwa zvaive zvakaderera. Kubva pane ruzivo rwazvino, kuratidzwa kwemazuva ese kune benzene mune izvi zvigadzirwa zvezuva. Hazvingatarisirwe kukonzera mhedzisiro yehutano. Zvisinei, izvi zvigadzirwa zviri kurangarirwa kudzivirira kumwe kuburitswa. JJCI iri kuongorora izvo zvinogona kukonzeresa kusvibiswa uko kwakatungamira mukuvapo kwebenzene muzvigadzirwa zvavo.
Kushandisa sunscreen kwakakosha kuhutano hweveruzhinji uye kudzivirira gomarara reganda. Vanhu vanofanirwa kuenderera mberi nekutora matanho akakodzera ekudzivirira zuva kusanganisira kushandisa reef sunscreens yakachengeteka, kuvhara ganda nembatya neheti, uye kudzivirira zuva panguva yepamusoro maawa.
Vatengi vanogona kutaura neJJCI Consumer Care Center 24/7 nemibvunzo kana kukumbira kubhadharwa nekufonera 1-800-458-1673. Vatengi vanofanirwa kubata chiremba wavo kana mupi wezvehutano kana vaine chero mibvunzo, zvinetsekana kana vakasangana nematambudziko ane chekuita nekushandisa izvi zvigadzirwa zvesikirositi. JJCI iri kuzivisawo avo vanogovera uye vatengesi netsamba uye iri kuronga kudzoka kwezvose zvinorangarirwa zvigadzirwa.